fiitamiinnada Ilaaliya Caafimaadka Iyo Quruxda Jirka iyo cuntooyinka Laga Helo - iftineducation.com
fiitamiinnada Ilaaliya Caafimaadka Iyo Quruxda Jirka iyo cuntooyinka Laga Helo
iftineducation.com – Waxa ay khubarada caafimaadku sheegayaan in ay jiraan dhowr nooc oo ka mid ah fiitamiinnada oo awood u leh in uu jirka uu la dagaallamo gabowga, kuwaas oo muddada ugu dheer ee suurtogalka ah maqaarka ku ilaalinaya dhalinyaronimada.
Maqaarku awood buuxda uma laha in uu samayst fiitamiinnada uu u baahan yahay, sidaa awgeed waxa uu mar kasta gacan ka sugaa cuntada oo uu ka raadsado fiitamiinnadaa.
Waxaa ka mid ah Fiitamiin C oo isagu si weyn unugyada maqaarka uga difaaca dhibta ka soo gaadhi karta fallaadhaha qorraxda, Faytamiin C waa kan ugu muhiimsan ee maqaarka ku ilaalin kara dhalinyaronimada iyo in aanu midabkiisa darayga ahi ka tagin. Qoraalkeenan waxa aynu ku baranaynaa qaar ka mid ah fiitamiinnada muhiimka u ah caafimaadka iyo qurxinta maqaarka iyo weliba cuntooyinka ugu habboon ee laga heli karo:
Fiitamiin C: Cuntooyinka laga helo waxaa ka mid ah saytuunka, liin macaanta, baydariinta, Cananaaska IWM.
Fiitamiin E: Fiitamiin E waxa uu maqaarka ka ilaaliyo dhibaatada ka iman karta fallaadhaha qorraxda, wasakhowga cimilada iyo maaddooyinka kale ee burburin kara unugyada maqaarka. Fiitamiin E waxtarkiisu waxa uu sii bataa marka uu la falgalo fiitamiin C ga. Cuntooyinka laga helana waxaa ka mid ah, Qamandiga, Cananaaska, Maangaha, Saliid saytuunta iyo Fuul Suudaaniga.
Omega 3: Omega3 waxa uu maqaarka ka dhigaa qoyaan dhalaal fiican leh, cuntooyinka laga helana waxaa ka mid ah, lawska, kalluunka, gaar ahaan noocyada aan lahayn dufanka badan, Shaah Akhtarka, IWM.
FG: Biyaha la cabbo ayaa iyaguna si weyn u ilaaliya caafimaadka maqaarka iyo quruxdiisa, waxa ay giijiyaan maqaarka oo ay ka ilaaliyaan coodh-coodhka, waxa ay kordhiyaan dhalaalka maqaarka, waxa aanay ka ilaaliyaan inta badan ee astaamaha gabowga.
Maxaad Ka Taqaanaa Waxtarka Canbaha Iyo Cudurrada Uu Daaweeyo
Wasiirkii Gaashaandhiga Mareykanka oo is casilay iyo Madaxweynaha Mareykanka oo loo digay